नेपाली जनता के चाहन्छन ? - नेपाली जनता के चाहन्छन ?
दक्षिण अफ्रिकामा ५१ जनाको मृत्यु | दुर्गम गाउँमा ‘एक घर एक धारा | नौ थान अवैध भरुवा बन्दुक नियन्त्रणमा | ताम्राकारको निधनमा कांग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त [यस्ताे छ विज्ञप्ति] | श्रीलंका आक्रमण : मृत्यु हुनेको संख्या ३५९ पुग्यो
नेपाली जनता के चाहन्छन ?
२०७५, २७ चैत्र, 08:39:09 PM
♥ उध्र्वशान भट्ट ♥
राणा शासनमा समाजमा सबैभन्दा बढी सम्मान कसैलाई थियो भने राजा र ब्राह्मणलाई थियो । दुवैलाई त्यो सम्मान पचेन र भारतको आलिंगनमा रमाउन दिल्ली धाउन थाले । राजतन्त्रले भारतको आलिंगनको प्रतिफल २०६३ तिर चाख्न पुग्यो । नेपालका ब्राह्मणहरु पनि भारतकै सिदा–दक्षिणामा गुलामगिरी गर्न बाध्य छन् ।
पञ्चायतकालभरि नेपालको राज्यसंयन्त्रले सदैव संरक्षण गरेको पहाडी समुदायलाई नै हो । तर पञ्चायतलाई पहाडले नै फाल्यो । प्रतिफल २०७२ सालको भुईचालो पीडितलाई तराईमा पुर्नवास गर्ने कुरा मधेशको चर्को विरोधपछि तुहियो विचरा पहाड निरीह भयो । विचरा पहाडका भुईचालो पीडितहरु त्यही चर्केको जमिनमा छाप्रा हालेर खुम्चिन बाध्य छन् । समान अधिकारका लागि भन्दै लड्नेमा नेतृत्व लिएको थियो तराईको पहाडे समुदायले त्योपनि विशेष गरी मध्य र पूर्वीं तराईका पहाडे समुदायले । २०६२ / ६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व पनि त्यही वर्गले लिएको थियो । तर २०६२ / ६३ पछि त्यही पहाडी समुदाय मधेशबाट विस्थापित हुन पुग्यो ।
नेपालमा धर्म निरपेक्षताको आन्दोलनमा बौद्धमार्गी विद्धानहरुको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । परन्तु आज यही धर्मावलम्वीहरुको जनसंख्याको अंश ह्रासोन्मुख हुँदै छ । ब्राह्मणवादी सोचले हाम्रो संस्कृति नाश गर्यो भन्ने जनजातिहरुका दुर्गमका वस्तीहरुमा अचेल उनका पुरातन पुरोहित पाइँदैनन्, झाक्री, लामाहरुको अस्तित्व समाप्त हुन लागि सक्यो । पादरी र चर्चको प्रभुत्व कायम हुँदैछ ।
नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र कुनै बेला नेवार समुदायको हातमा थियो । विशेष गरी शाहवंश र राणातन्त्रले यो परम्परालाई कायम नै राखेको थियो । नेपाल तिव्वतबीच भएका तीनवटै युद्धको प्रमुख कारण तिव्वतसँगको व्यापारमाथि एकाधिकारको विषय थियो जुन व्यापारमा स्वयम् नेवार समुदायको एकाधिकार थियो । पञ्चायतकालभरी अर्थमन्त्रालय लगायतका आर्थिक क्षेत्रमा नेवार समुदायको प्रभुत्व थियो भने दरबारको सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापनमा नेवार वर्गकै हालीमुहाली थियो ।
राणाशासनको समाप्तीसँगै व्यापारमा नेवार समुदायको वर्चस्व खस्किदो क्रम २०४६ सालपछि उत्कर्षमा पुग्यो भने २०६३ सालपछि त लगभग समाप्त हुने दिशामा अग्रसर छ जब कि २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ सालको परिवर्तन काठमाडौंका नेवार समुदायको संलग्नता नभएको भए सम्भव नै हुने थिएन । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा जमिन्दारको जग्गा खोसेर थारु समुदायमा बाड्ने राजा महेन्द्रका समर्थक थारुहरु अचेल विरलै औलामा गन्न पाइन्छन् । हिन्दूत्व र हिन्दूहरुको संरक्षणमा अहोरात्र खटिएको शाहवंश हट्नुमा मधेशका हिन्दूहरुको नेतृत्वमा परिचालित आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा निम्तिएको वातावरण पनि एक कारण हो । तर आज मधेशका हिन्दूहरु आफै असुरक्षित हुँदै लाश जलाउने ठाऊँ नपाएर खुम्चिनु परेको छ ।
नेपालमा इसाईहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु यो त मेरा नेपाली सह–धर्मवालम्बीहरुले उत्पादन गरेको हो भनेर कुनै इसाई मुलुकहरु किन्न तयार छैनन् । ओहो यो त मेरा नेपाली सहधर्मी नेपाली मुसलमानहरुले उत्पादन गरेका वस्तु हो भनि किन्न कुनपनिै मुस्लिम देशहरु तयार छैनन् । यो हाम्रो बौद्ध धर्मावलम्बी नेपालीले उत्पादन गरेको वस्तु हो यो किनिदिए ती विचराहरुको कल्याण हुने थियो भन्ने कुनै चाहना अरु बौद्धधर्मावलम्बी देशहरुमा पनि छैन ।
नेपालका हिन्दूहरु सम्पन्न होऊन भन्ने सद्भावना राख्ने भारतमा एकजना पनि हिन्दू भेटिदैनन् । मधेशका नेपालीले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरु किने उनीहरुको गरिबी निवारण हुन्थ्यो भनी भारतमा अहिलेसम्म कुनै सोच देखिएको छैन । हिमाली भेगका जनताका उत्पादनहरुलाई निर्वाध चीन जान दिए उनीहरुको कल्याण हुने थियो भनी सोच्ने फुर्सद उत्तरतिरका मान्छेहरुलाई पनि छैन । परन्तु हामीहरु ती देशहरुप्रति यति समर्पण भाव राख्दछौं की उनीहरुका इशारामा नेपालभित्र रक्तपात मच्चाउन पनि सिंगो समाज तयार भएर बसेको छ ।
परन्तु नेपाली भाषा जोगाउनु पर्दछ भन्ने चिन्तकहरु राणाशासन र पञ्चायतकालमा नेपाली भाषामा राम्रो काम भएको थियो भनी स्वीकार गर्न तयार छैनन् बरु उल्टो त्यो कालरात्री सबै समस्याको जड हो भन्छन् । राजा वीरेन्द्रले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि छुट्याएका हजारौं हजार बिगाहा जग्गा संरक्षण गर्न नसक्ने असक्षमहरु उक्त विश्वविद्यालयकको नाम नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय राख्न मै आफुलाई बहादुरी सम्झिन्छन् जहाँ ३६५ दिनमा ३६६ दिन तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी र प्राध्यापकहरु संस्कृत भाषा जोगाऔं भन्दै गोष्ठी गर्दै हिड्छन् ।
काठमाडौंमा एउटा नेतालाई रुघा लाग्दा अर्को नेतालाई आच्छयु आउँछ । कुनै नेता अस्पताल भर्ना हुनासाथ उनलाई भेट्न उनका विपक्षीहरुको अस्पतालमा ताँती लाग्छ । परन्तु तिनै नेताहरु गाउ, शहर र वस्तीमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई एकअर्का दलप्रति ह्रिंसक बन्न , भिड्न र लड्न उक्साई रहेका हुन्छन् । पुरै समाज नेताको आदेश पालन गर्न आफ्नो जन्मदिने आमा र पालन गर्ने बाबुलाई त्याग्न पनि तयार भएर बसेको छ । यस्तो अन्धो समाजको गन्तव्य भनेको नै आँखा भएकाहरुले जता लग्यो उतै लाग्ने हो । आँखा देख्नेहरु मुर्खहरुलाई सदैव दास बनाएरै राख्न चाहन्छन् । समाजशास्त्रले पनि त्यही भन्छ ।
संस्कृत र नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिमा राणाशासन र पञ्चायतकाल स्वर्णकालका रुपमा चिनिन्छ । वर्तमान समयमा नेपाली भाषा लोपोन्मुख हुने अवस्था छ । संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुनेछ भन्ने एउटा प्रावधानका कारण यस भाषाको घिड्घिडो जोगिरहेको छ । परन्तु नेपाली भाषा जोगाउनु पर्दछ भन्ने चिन्तकहरु राणाशासन र पञ्चायतकालमा नेपाली भाषामा राम्रो काम भएको थियो भनी स्वीकार गर्न तयार छैनन् बरु उल्टो त्यो कालरात्री सबै समस्याको जड हो भन्छन् । राजा वीरेन्द्रले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि छुट्याएका हजारौं हजार बिगाहा जग्गा संरक्षण गर्न नसक्ने असक्षमहरु उक्त विश्वविद्यालयकको नाम नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय राख्न मै आफुलाई बहादुरी सम्झिन्छन् जहाँ ३६५ दिनमा ३६६ दिन तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी र प्राध्यापकहरु संस्कृत भाषा जोगाऔं भन्दै गोष्ठी गर्दै हिड्छन् ।
पञ्यातकालको पछिल्लो कालखण्डमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मासिक शुल्क ३७ रुपंैयाँ पचास पैसा थियो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मेसमा २ रुपैंयामा भात खान पाइन्थ्यो । तर त्यत्तिबेला नेपाली जनतालाई त्यो गुणस्तरको सस्तो शिक्षा पचेन । दिनभरी हडताल र विरोधमा व्यस्त भए । आजै तिनै हडतालवाला विद्यार्थीहरु आफ्ना घरखेत बेचेर आफ्ना सन्तानलाई पढाउँदैछन् । तरपनि उनीहरु भन्दैछन् ,पञ्चायत भनेको कालरात्री हो ।
आफुले कहिल्यै नदेखेका, नचिनेका, विश्वास गर्ने कुनै ठोसप्रमाण नभएका, कुनै आधार नभएका, भरोसा नभएका मान्छेहरुका मीठा र चिल्ला शव्दका पछि लागेर नेपालको सिंगो ग्रामिण वस्तीका युवाहरु अर्काका लागि आफ्नालाई समाप्त गर्ने दिशामा रक्तपिपासु भएर आफ्नो जीवनको आहुति दिन र अर्काको जीवन लिन आतुर भएर लागे । आज त्यही ग्रामिण बस्ती आफ्नो कुखुराको खोर र भैंसी गोठको समेत कर तिरेर विश्वकै सबैभन्दा कठिन गरिबीयुक्त जीवनयापन गर्दैछ ।
महेन्द्र राजमार्गमाथि गाडी कुदाउँदै महेन्द्रलाई तानशाह भन्ने मानिसहरुको अत्यधिक बहुमत छ । यसो होइन इतिहास मेटन् हुँदैन भन्नुभयो भने तपाई प्रतिगामी बन्नु हुन्छ र सारा समाजले तपाईलाई हास्यँको पात्र बनाउँछ । इतिहास मेट्नु हुन्न भन्नेलाई हास्यँपात्र बनाउने समाजको गन्तव्य भनेको दास हुनु नै हो । ट्रली बसका तार चुडाल्नेहरु नै राजा वीरेन्द्रलाई गाली गर्दै तेलमा आत्मनिर्भर हुुनपर्दछ भन्ने भाषण ठोकीरहेका हुन्छन् भने त्यही भाषणमा ताली ठोक्ने जमातले सारा समाजलाई कज्याएर बसेको छ ।
राजा वीरेन्द्र र गान्धी परिबारको सम्वन्ध विग्रिने एउटा कारण सिक्टा सिंचाई आयोजना पनि हो । त्यो सिंचाई आयोजना राजा वीरेन्द्रकै पालामा २०४० सालभित्रै बनिसक्ने गरी योजना तयार भएको थियो । सो आयोजना त्यत्तिबेला नै निर्मांण सम्पन्न भएको भए आज बाँकेको सम्पन्नता नेपालमा तराईका जिल्लामा अग्रणी स्थानमा हुने थियो । सो आयोजना २०४० सालमा सम्पन्न नहुदा बाँके जिल्लाले हरेक एक विघामा हरेक वर्ष १५ क्विण्टल धान गुमाई रहेको छ । तर त्यही बाँकेका जनताहरु वीरेन्द्रचोकमा रहेको राजा वीरेन्द्रको सालिक भत्काउनमा नै आफूलाई बहादुर सम्झिन्छन् ।
नेपालका नदीहरुको जलप्रवाहमा प्रभावित भएको खण्डमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेको तराईको मैदान हो । तर तराई नै सो जलप्रवाह प्रभावित गर्ने कारकतत्वका रुपमा आपूmलाई क्रियाशिल तुल्याउँदै छ । तराईका लागि पहाडका नदीहरुको के महत्व छ भन्ने कुरा कसैले तराईमा गर्यो भने त्यो मानिस तराईमा बस्नसक्ने अवस्था नै छैन । हुलाकी राजमार्ग समयमै बन्न सकेको भए दक्षिणी तराईको एउटा सिँगो भाग नै गरिबीको रेखाबाट उहिल्यै माथि उठीसक्ने थियो तर सो मार्ग बन्न विलम्व हुँदा पनि तराईको सिंगो दक्षिणी बेल्ट मौन छ । हुलाकी राजमार्ग चाडो बनाउने कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो मान्छेलाई त्यही भेगका जनताले मधेश बिरोधीको विल्ला भिराएर लखेट्न थाल्छन् ।
अवैज्ञानिक रुपमा पहाडमा खनेका सडकका कारण पहाडमा मूलहरु सुकेका छन्, वस्तीका वस्तीहरु पहिरोको जोखिममा छन् तर विकासे दलालहरुको गुलियो नारामा उनीहरु आफ्ना पैताला मुनी आफ्नै चिहान खन्दै घरछेऊमा सडक आयो भन्दै हिउँदमा अवीरजात्रा गरिरहेका हुन्छन् । सामुदायिक बनले आफ्ना गाईबाख्रा चराउन बनमा छिर्न दिंदैन । दात कोट्याउने सिन्को पनि वनबाट लान दिंदैन । तरपनि त्यही वनका बरिपरीका मानिसहरुलाई यो वनमाथि समुदायको अधिकार छ भन्दै उनीहरुको आैंठाछाप लगाउँदै अर्कै समुहले वनमाथि राज गरिरहेको हुन्छ परन्तु त्यो समाज मौन छ वा त्यसैमा रमाएको छ । गिटी र बालुवाका लागि डोजरहरु नदीमा अहोरात्र चालु हुन्छन् तर त्यही छेऊको बासिन्दालाई घरमा खाने माछा मार्न जल उपभोक्ता समितिले नदीमा छिर्न प्रतिबन्ध लगाएको हुन्छ तर पनि सोही समाज भने जल उपभोक्ता समितिमा भोट हाल्न बैशाखको धुपमा पनि लाईनमा लागेको देखिन्छ ।
नेपालमा रेल सेवा भित्राउने चन्द्र शमशेर हुन् । तर पनि त्यही रेलमा बसेर उनैलाई गाली गर्दैछौं हामीहरु । महेन्द्र राजमार्गमाथि गाडी कुदाउँदै महेन्द्रलाई तानशाह भन्ने मानिसहरुको अत्यधिक बहुमत छ । यसो होइन इतिहास मेटन् हुँदैन भन्नुभयो भने तपाई प्रतिगामी बन्नु हुन्छ र सारा समाजले तपाईलाई हास्यँको पात्र बनाउँछ । इतिहास मेट्नु हुन्न भन्नेलाई हास्यँपात्र बनाउने समाजको गन्तव्य भनेको दास हुनु नै हो । ट्रली बसका तार चुडाल्नेहरु नै राजा वीरेन्द्रलाई गाली गर्दै तेलमा आत्मनिर्भर हुुनपर्दछ भन्ने भाषण ठोकीरहेका हुन्छन् भने त्यही भाषणमा ताली ठोक्ने जमातले सारा समाजलाई कज्याएर बसेको छ ।
गोर्खा भर्तिकेन्द्र बन्द गर्नुपर्दछ भनेर सडक तताउनेहरु जब सरकारले साच्चिकै बन्द गर्ने सुरसार गर्न थाल्छ अनि उनीहरु हाम्रो रोजगारको प्रत्याभूति नगरी गोर्खा भर्तिकेन्द्र बन्द गर्न पाइन्न भनी सडकमा आउँछन् ।
पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढालेर लखन थापाको शालिक राखिएको छ । लखन थापाको शालिक राख्न पृथ्वीनारायण शाहकै शालिक ढाल्नुपर्ने परीस्थिति किन आयो ? के पोखराभरी अरु चोक थिएनन् र जहाँ लखन थापाको शालिक राख्न सकियोस् । सदैव समुदाय समुदायबीच वैमनस्यताको विजारोपण गर्ने अभियानका अंग हामी बन्दै छौं । यो अभियानको अंग नबनौं बीचको बाटोमा हिडौं भन्ने मानिस नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुष्ट मानिसमा गनिन्छ । समाज चल्ने भनेकै मध्यमार्गबाट हो । जहाँ मध्यमार्ग समाप्त हुन्छ त्यो समाज लडेर समाप्त हुन्छ । जसरी कौरव र पाण्डवहरु लडेर समाप्त भए । नेपालमा हरेक जाति वर्ग, समुदाय, परिवारका सदस्यहरु सबैतिर अतिवाद हावी छ । यस्तो अतिवादी र असहिष्णु समाजहरु भएका मुलुकहरु लडेर नै समाप्त भएका छन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका कुरा गर्दा नेपालतिरका तराईबासीहरु रोटीवेटीका सम्बन्ध हें भन्दै कुर्लन थाल्दछन् र वर्षामा भारततिर बाँधिएका वाँधहरुले तिनै तराईबासी डुबानमा परी विचल्ली हुँदा भारततिरका तराईबासीहरुलाई रोटीवेटीको कहिल्यै याद आउँदैन । हुलाकी राजमार्ग भारतीय ठेकेदारहरुले समयमै बनाई दिएको भए नेपालतिरका रोटीवेटीवालाहरुको गरिबी हट्थ्यो होला भनी भारततिरका रोटीवेटीबालाहरु कहिल्यै सोच्दैनन् । रोटीवेटीको सम्बन्ध त दुवैको दुवैतिर हुन्छ जहाँ एउटाको पीडा अर्कोको पनि पीडा हुनुपर्ने हो । यस्तो होइन सत्य यो हो भन्ने कुरा कसैले तराईमा गर्यो भने त्यो मानिस तराईमा नबसे हुन्छ । यस्तो भ्रमित समाज कति दिन टिक्छ ?
नेपालका मुसलमानहरु र क्रिश्चियनहरु दौरासुरुवाल लगाउनमा गर्व गर्छन् । नेपाली भाषा बोल्न गर्व गर्छन् , हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राजा चाहिन्छ भनेर नारा लगाउँछन् तर स्वयम् हिन्दूहरु हिन्दूराष्ट्र र हिन्दू राजाको विपक्षमा सडकमा उत्रिरहेका छन् । अफगानिस्तानदेखि बंगलादेशसम्मका कुनैबेला शासक रहेका हिन्दूहरुको पतन यस्तै गतिविधिले भएको हो जुन गतिविधि नेपालमा भईरहेको छ । यस्तो भष्मासुरको जस्तो आफ्नो संरक्षक र हितचिन्तकको अहित गर्ने बहुसंख्यक धर्माबलम्वी भएको धर्म र मुलुक दासतामा नगएर अरु को जान्छ र ?
युवा जतिलाई वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर पठाएर यता खेतवारी बाझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने र जग्गा कव्जा गर्ने उर्दी जारी हुन्छ र त्यसैलाई कृषिक्रान्ति भन्दै सारा समाज मक्ख परेको छ । घरछेऊको पानी पंधेरो भत्काएर बोतलयुक्त पानी खानुपर्छ भन्ने मानिसका पछाडि सारा समाज ज्यान अर्पण गर्न तयार छ । यो पानी पंधेरो भत्काउन हुदैन भन्ने मानिसलाई विकास बिरोधी भन्दै विकासप्रेमीहरुले गाउँमा बस्नै दिंदैनन् ।
आखिर के चाहन्छ त यो समाज ?
विश्वकै इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने आफ्नो हित हेर्ने समाज सदैव गौरवशाली भएको पाइन्छ । आफ्नो अहित गर्दै अर्काको हितका पछाडि लाग्ने समाजको गन्तव्य भनेको दासत्व नै हो । इन्का र माया सभ्यता स्पेनीश र पोर्चुगीजको बन्दुकको भरमा मात्रै समाप्त भएको होइन, परन्तु इन्का र माया सभ्यता भित्रका असन्तुष्ट समुहले स्पेनीश र पोर्चगीचहरुका पक्षमा दिएको समर्थन नै प्रमुख कारण हो । अफ्रिका महादेशको दास व्यापारमा गल्लावाल र गाऊँ गाऊँमा गएर मानिसहरु जम्मा गर्ने काम युरोपेलीहरुले गर्दैनथे परन्तु स्थानीय अफ्रिकाबासीहरुले नै गर्दथे । आफ्ना जातिभाईहरुलाई दास बनाउनेहरुको परिणति पनि दास हुनु नै हो ।
सबै विनाशको बाटोमा छन् । वास्तवमा नेपाली जनतालाई यो देश, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, गौरव, आफ्नोपन, इतिहास सबै भारी भएको छ । नेपाली जनताहरु स्वतन्त्र नेपालको भारी बिसाएर दासताको भारी बोक्न आतुर छन् । नेपाली जनताका गतिविधिहरु त्यही दिशातिर अग्रसर छन्
हस्तिनापुरको सिंहासनमा बसेका पाण्डवहरु मथुराको खटनपटनमा कसरी चल्नु पर्यो त्यो इतिहास सबैलाई विदितै छ । तीनैलोकको मालिक रावणको लंकामा अन्त्यपछि विभिषण राजा त भए तर विचराले रामको दास भएर उनको सवारी चलाउन अयोध्यासम्म आउनु पर्यो । अरुका लागि आफ्नाको अहित चाहने व्यक्ति, समाज, मुलुक, नेता, शासक अल्पकालमा सफल देखिए पनि दीर्घकालमा हुने भनेको अरुको दास नै हो । वर्तमान नेपालमा व्याप्त क्रियाकलापहरु र जनताको मनस्थितिमा गुणात्मक सुधार नआउने हो भने नेपालको बाटो पनि इन्का, माया, लंका सभ्यता र अफ्रिका जस्तै हो ।
सारमा भन्नुपर्दा के हिमाल, के पहाड ,के तराई,के पूर्व, के पश्चिम, के गाऊ, के शहर, के शिक्षित, के अशिक्षित सबैतिर क्षणिक लाभका लागि आफ्नो चिहान आफै खन्ने मानिसहरुको जमातले सिंगो मुलुकलाई आफ्नो पञ्जामा राखेको छ । सबै विनाशको बाटोमा छन् । वास्तवमा नेपाली जनतालाई यो देश, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, गौरव, आफ्नोपन, इतिहास सबै भारी भएको छ । नेपाली जनताहरु स्वतन्त्र नेपालको भारी बिसाएर दासताको भारी बोक्न आतुर छन् । नेपाली जनताका गतिविधिहरु त्यही दिशातिर अग्रसर छन्
यो भष्मासुर प्रवृत्तिलाई रोक्ने शक्तिको उदय भएन भने नेपाल लामो समयसम्म स्वतन्त्र रहने लक्षण देखिएको छैन । नेपालका वर्तमान राजनीतिक दलहरुभित्रका देशभक्तहरुले यस विषयमा चिन्तन गरुँन । किनभने स्वंयम् समाज नै दासतातिर जान अग्रसर छ भने संसारको कुनैपनि शक्तिले त्यो समाजलाई दास हुनबाट रोक्न सक्दैन । नेपालको समाजिक मनोविज्ञान त्यही दिशामा जाँदै छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा सिंगो समाज दास हुने दिशामा अग्रसर छ । उनीहरुका गतिविधिहरुले यही संकेत गर्दछ ।
अनौठा विशेषताका गणेशमान सिंहको सम्झना
के राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ ?